नया नेपाल भनेको के हो त ?
न्हू दँया भिन्तुना!!
बिजय श्रेष्ठ धादिङ्ग, हाल ईराक
साथ र सार्थक भन्ने शब्द पनि अचम्मको हुने रहेछ । हुनत यो सन्सारमा संसारिक प्रणी भएर जन्म लिए पछि एक र अनेकताले जेलिएको हुन्छ । त्यो अनेकताले नै यो संसारमा बिभाजनको सिमा स्थम्बको रेखाङकनको चित्र कोर्न सुरु गरेको हुन्छ । त्यसकै माध्यमले नै आफनो र अर्का भन्ने कुराको आफनत्व माया जाल बुन्ने एउटा सान्सारिक माया जालको बिजारोपण गर्दछ ।
मानिसको मनलाई फराकिलो पार्दै लैजाने तत्व हो त्यो माया जाल । त्यो जालमा कुदिएका र भरिएका अंकुसे ति गांठाहरु । जसरी ती गाठाको सहायताले गर्दा आफनो संसारमा रमाईरहेका ति माछाहरु पासोमा पर्छन त्यसरि नै आफनत्वको जालमा बाँधिएकाहरु आफना कै पछि लागेर भाग वण्डा लगाउने तर्फ अग्रसरता देखाउछन् । अनि त्यति बेला देखि सुरु हुन थाल्छ तेरो र मेरो ।
अनि ति अगि हामी समान हौ हामीमा को सानो को ठुलो हो भन्ने अहमता छैनौ भन्ने सबै अडानहरुले गन्तव्य विहिन र अर्थहिनताको गोरेटोलाई अंगाल्दछ र त्यति बेला सबैको मनमा उतार चडाबको हुरि बतासले ठुलो मोड लिन पुग्छ र सारा तपो मनहरुमा बैमनष्यताको हुरीबतास चल्न थाल्छ त्यहा असोचनिय चट्याङ पर्दछ ।
त्यो चट्याङ नै बन्न जान्छ साउनको भेल त्यसले निरन्तरता लिन थाल्दछ र आफनो स्बार्थ पुर्तिको लागीमा आफुलाई बलिदान समेत दिन चुक्दैन । त्यो अद्भुत स्वार्थ नै हाम्रो समाजको भयानक शत्रुबादको जड हो ।
यो विकाशोन्मुख शताब्दिमा आएर भए गरेका आफ्ना रिती रिवाज परम्परालाई चटक्क भुल्ने भन्दा पनि त्यसलाई अझ परिमार्जित र बिना उतार चडाब तरिकाले अप्नाउने परिपाटिलाई अंगाल्न सक्ने रिति रिवाजको सृजना गराउन पाए नयाँ कुराको आभास हुने थियो जस्तो लाग्दछ । आफुसगँ भएको कुरालाई परिमार्जित गरेर नयाँ ढंगसँग नयाँ तरिकाबाट उपभोग गर्नुलाईको नयाँ सृजना भन्ने गरिन्छ । जसरी बिकाशोन्मुख देशहरुले आफुसँग भएका वस्तुहरुलाई नयाँ सजावट नयाँ प्रबृतिबाट उपभोग गरेर अहिले विश्वमा सर्व शक्तिमान बन्न पुगेका छन् । त्यसलाई पो नयाँ र नौलो भनेर परिभाषित गरिन्छ ।
आफनो खुबि तागत र आय श्रोतलाई मध्य नजरमा राखेर कसैले कसैलाई कुनै तवरबाट शंकट नपार्ने गरि गरेको सिप सजावटलाई पो नयाँ सोच नयाँ बिचारको थालनी भनेर भनिन्छ । नयाँ बनाउने भनेर आफुसँग भएको सारा वस्तुलाई चटक्क भुलेर सारा कुरालाई परिमाजित गर्न पनि आफुसगँ प्रसस्त पुंजि हुनु पर्‍यो । बिना पुंजिको नयाँ सृजना हामीले सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्दैनौ र गर्ने बानि पनि राम्रो जस्तो लाग्दैन ।
जबसम्म मानिसमा आफनो बिचारमा परिर्बतन आउदैन तब सम्म कसैले पनि केहि पनि गर्न सक्दैन । सत्ता परिबर्तन हुन्छ शासक परिवर्तन हुन्छ र वक्तित्वकला परिवर्तन हुन्छ । जबसम्म आर्थिक क्रान्तिमा परिवर्तन आउदैन त्यति बेलासम्म जो कसैले पनि नसोच्नु परिवर्तन भन्ने शब्द । त्यसैले हामीले परिवर्तन चाहने हो भने खहरे भेल भएर होईन समुन्द्रको चालमा चल्न सिक्नु पर्छ । त्यसैले परिवर्तन र नयाँ भन्ने शब्द बोल्नुमा जति सजिलो छ गराउनलाई आकाश पातालको फरक छ ।
हाम्रा देश बहाक सत्तासिन बाबु साहेबहरुले भन्दै आउनु भएका छन् नयाँ नेपाल, नयाँ मान्छे सबै कुरा नयाँ हुनु पर्छ रे तर कसरी हुने त्यहि हलो त्यहि कोदालो त्यहि उकाली ओराली त्यहि झुपडी त्यही भोटो दौरा र बिट फाटेको ढाका टोपी; खै कहाँ आयो त परिवर्तन ।
परिवर्तन त आयो नेपालमा किन भएन त तेहि नून १० रुपयाँ किलॊमा पाउथ्यो भने अहिले १५ रुपयाँ भयो । मट्टीतेल ३० मा लिटरको पाउथ्यो भने अहिले ५५ भयो । ४ जनाको परिवारलाई मासिक ५ हजारले खर्च पुग्थ्यो भने अहिले ८ हजारले पनि नपुग्ने भयो । अनि भएन त नयाँ नेपाल । जनताले खोजेको नयाँ र नौलो परिवर्तन यहि होईन त । गरिब निमुखा जनताको लागी भएको नयाँ नेपालको नयाँ परिवर्तन यहि हो । अब नयाँ भन्ने शब्द कस्तो हुन्छ त । उतार चडाबको चपेटालाई नयाँ भन्ने हो भने गरिब निमुखा नेपाली जनताले कहिले सुखको सास लिने त यो प्रश्नको जवाफ जनताले बुझने गरि दिन परयो ति हाम्रा देश बहाक हस्तीहरुले । के परिवर्तन भनेको हुने खानेलाई मात्र हो । गरिब जनताले बाच्न पाउने अधिकार छैन । त्यसैले आर्थिक क्रान्तिको परिवर्तन भयो भने मात्र यो गरिब जनताको मुहारमा परिवर्तनको सुरुवात हुने छ । त्यसैले हाम्रा ती नेताहरुले सर्वप्रथम आर्थिक क्रान्तिको ढोकालाई ढक ढक्याउन पुग्यो भने मात्रै नयाँ नेपालको कल्पना हामीले गने सक्छौ ।
( बिजय जि को ब्लगमा केही दिन समस्या देखिएकोले यो पोष्ट दौंतरीमा राखिएको छ। आशा छ वाहाले अरु लेखहरु लेख्दै जानुहुने छ। – दौंतरी)
"हाम्रा देश बहाक सत्तासिन बाबु साहेबहरुले भन्दै आउनु भएका छन् नयाँ नेपाल, नयाँ मान्छे सबै कुरा नयाँ हुनु पर्छ रे तर कसरी हुने त्यहि हलो त्यहि कोदालो त्यहि उकाली ओराली त्यहि झुपडी त्यही भोटो दौरा र बिट फाटेको ढाका टोपी; खै कहाँ आयो त परिवर्तन ।"
एकदम सटिक लेख्नु भयो। मैले सधै यही कुरा सोध्ने गर्छु, सरकारी बोर्डबाट ५ हटाएर परिबर्तन हुदैन,तन्त्र फेर्दैमा परिबर्तन हुदैन, शब्दका समुन्द्रबाट परिबर्तन हुदैन, जनताले के राहत पाए त्यो नै परिबर्तन हो। दु:खको कुरा "जन" शब्द कपिराइट गर्ने ठेकेदार पनि जनताको घर दैलोमा पुग्न सेकेनन।
तर के गर्नु देशवासीहरु नै बोर्डमा नाम फेरेर र दौरा शुरुवाल को साटो टाइ सुट पहिरेर परिवर्तन आंउछ भन्ने सोच्छन !
हैन भने काम भन्दा कुरा र कर्म भन्दा भिडको पछाडि रुमलिइरहनु पर्ने थिएन होला ।